Ikamva lokuhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ikamva lokuhamba
zokuhamba, ngandlela zonke, ngumqolo walo naliphi na ilizwe kunye noqoqosho lwalo. Kwakusezindleleni kuphela, rail, nomoya esakwazi ukudibanisa umhlaba ngendlela eya waba mncinci kakhulu kunokuba unjalo ngenene. Ngaloo ndlela, xa sijonga amashishini amakhulu kwihlabathi jikelele, ezothutho yenye yezona zinto zisebenzayo, ihlala itshintsha ukuze kuphuculwe ikamva lethu.
Imikhwa yamva nje yokundwendwela neyokuhanjiswa kwezothutho ibe kukwenziwa kokukhetha ukuba luhlaza. Intshukumo efuneka kakhulu ukugcina indalo yethu, Uphuhliso olutsha kwezothutho sele usebenza kulo mgaqo. kunjalo, ezi nkqubela phambili zisaphula imida yendlela besihamba ngayo kule nkulungwane idlulileyo. Kwaye ngokwenza oku, zisikhokelela kwikamva lokuhamba eliya kuthi ngokukhawuleza, iphephe, kwaye ngokoqobo kulo mhlaba.
Ikamva lokuhamba: Ukhenketho lweSithuba
Isithuba esiyinxalenye yokugqibela yoluntu kwelona xesha lide. kunjalo, okoko saye sanyathela inyanga kwiinyanga ezidlulileyo, akukabikho nto ibalulekileyo yokwazisa abantu abaqhelekileyo. Ngoku nangona, kukho ugqatso oluqhubayo lokuthatha abantu bathathe indawo, ngokuzonwabisa. Ukhenketho lwesithuba yinto enkulu elandelayo, kwaye ngelixa inokuxabisa kwaye ikhethekile, linyathelo elikhulu eliya ngekamva, eya kubandakanya konke ukubandakanyeka ikolon Mars okanye ukwenza izikhululo ezinendawo yokuhlala apho amakhulu abantu anokuhlala kunye. kunjalo, ngelixa inzululwazi isenokuba yathatha inyathelo eliya kwicala elililo, kungafuneka silinde izizukulwana ezimbalwa ngaphambi kokuba kubekho inkqubela ebonakalayo ebonakalayo.
Umzi mveliso woThutho: Iimoto ezingenazithuthi
Buza nawuphi na umntu malunga nombono wabo wokuhamba ngexesha elizayo, kwaye zingaphezulu kokuchaphazela iimoto ezingenamqhubi. Sele kukho uloliwe kwihlabathi jikelele osebenza kule migaqo. Ngaphezu, ixesha elide kakhulu, Iinzululwazi kunye neenkokheli zecandelo bezisebenzela ekwenzeni iindlela zikhuseleke ngokubandakanya itekhnoloji yale mihla yethu amava okuqhuba. Yintoni eyenza iimoto ezingenamqhubi zikufanele ukulinda kukuba ziya kuwuguqula ngokupheleleyo umzi mveliso ngeendlela ezininzi. Ukusuka ekubeni ngaphezulu Indawo intle nokhuseleko ezindleleni, abantu baya kuba nakho ukugubungela umgama omde ngaphandle koxinzelelo lokuba baqhube iiyure.
Ikamva lokuhamba: Uqeqesha
Omnye wabadala Iifom zothutho lukawonkewonke emhlabeni, oololiwe basenendawo ebonakalayo kwikamva lethu. Ngokumangalisayo, mhlawumbi kunangaphambili. Njengoko itekhnoloji entsha yenzelwe ukwenza iinkqubo zikaloliwe zikhuseleke ngakumbi, Ngesantya, kwaye kulula ngakumbi, isidingo esisiseko senkqubo enjalo siya kwanda ngokuzinzileyo. Uloliwe sele iyinto yokulingana kwezentlalo njengoko ezona zityebi zihlala zikhwela ecaleni kwabona bantu bahluphekayo kodwa ngenxa yokunyuka ngokukhawuleza kwabemi behlabathi, ngakumbi kumazwe ahambele phambili kwezoqoqosho, Iinkqubo ezifanelekileyo nezingabizixabiso koololiwe ziya kubaluleka ekulweni ukuxinana kweemoto. Oku kuya kuba nempembelelo enkulu kwindalo esingqongileyo kuba oololiwe baya kuba nako ukusebenza ngokufanelekileyo kumandla acocekileyo ngelixa kwangaxeshanye bethatha iimoto ezingenakubalwa zerhasi endleleni kunye Ukunciphisa ukukhutshwa komhlaba kwe-CO2.
I-Berlin ukuya kwitikiti laseZurich
I-Basel ukuya kwitikiti laseZurich
IVienna ukuya kwitikiti laseZurich
IHyperloop ichazwa njengeyona ndlela yokuqala yokuhamba 100 iminyaka. ” Kubandakanya ukuhamba ngesantya esiphezulu ngaphakathi kwetyhubhu, ukudibanisa indawo enye nenye. I-Hyperloop inokuthi isetyenziselwe ukuthutha impahla kunye nabantu. kunjalo, nangona iEonon Musk ene-enigmatic iphambili kolu teknoloji, amanye amazwe anjalo ukuthandabuza ngeHyperloop kwaye ukuba kufanelekile ukutyala imali. Nangona kunjalo, Ukuhamba ngale ndlela intsha yokuhamba kusondele kwinyani kunokuba besikulindele, ngovavanyo kunye nokwakhiwa kweetyhubhu esele kuqhubeka eCarlifonia kwaye kungenzeka iYurophu kungekudala.
IHambourg ukuya kwitikiti laseCopenhagen
Rotterdam ukuya eHamburg amatikiti
Le yenzelwe abahambi ngezitulo ezihamba ngeenyawo, bayakonwabela ukutyelela iindawo ezintsha kodwa bakhetha ukuyenza loo nto bephuma kunqabiseko lwamakhaya abo. Ngelixa i-VR sele ihambile kwintengiso, kungekudala, siza kubona ukudibana phakathi kweVR, IR, kunye ne-AR, ekhokelela kumava asondele kubomi benene njengoko kunokwenzeka. Ukusuka kundwendwele imimangaliso esixhenxe yehlabathi ukuya kuthatha ombi ungene kwi-Great Barriers Reef, obu buchwephesha butsha buza kunceda abantu babone umhlaba kunanini na ngaphambili.
Siya kukuvuyela ukukunceda ufumane ezona ndlela zikhethileyo zokufumana itikiti. Oda itikiti lakho kaloliwe kunye Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Ikamva lokuhamba” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffuture-of-travel%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye ungayitshintsha i-pl ukuya kuthi ga kwi-n okanye kwi-nl kunye nolwimi oluninzi olukhethileyo.
I have been writing about finance, travel and tech for various publications for eight years now but my love for the niches themselves go back to childhood. i love all sorts of topics but none more so than the holy three of finance,travel and tech - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam